Talooyin Galmada Ku Saabsan Oo Khaas U Ah Dumarka - iftineducation.com
Talooyin Galmada Ku Saabsan Oo Khaas U Ah Dumarka
iftineducation.com – Ma fududa inay haweeneydu ninkeeda siduu rabo u raalligeliso, gaar ahaan kolkay arrinru galmo ku lug leedahay.
Hogaanka Qabo: rag oo dhami way u riyaaqaan kolkay arkaan haweenkooda oo galmada hoggaanka u haaya. gabaryahay waa in aanad ka xishoon inaad gacalkaaga ugu baaqdid si aan bareer ahayn una tustid inaad galmo doonaysid, sida adigoo horaadka saara, madaxa iyo garka u salaaxa, hadal macaan oo xodxodasho ahna xaraaraddiisa ku kiciya.
Si Fiican U Raaxeyso: Dumarka qaar baa aaminsan in dhaqdhaqaaqa iyo reenka ka baxa xilliga galmada oo raggu dareemaa amaba maqlaa tahay wax ceeb ah, sidaa darteedna iscaburiya iskuna celiya dareenkooda oo dib u liqa. Alla yaa u sheega haweenka noocaas ah inay is caddibayaan, isna seejinayaan, nimankooda seejinayaan raaxo iyo macaan tii ugu darayd.
-Gabaryahay galmadu ma aha oo qura kaqaybgal jireed ee waxa weeye oo kale kaqaybgal dareen iyo rabitaan, dhunkashada iyo ereyada macaanina waa lagama maarmaan, mana loo baahna inaad ka xishootid ee saa u ogoow.
-Gabaryahay ogoow rag oo dhami inay aad iyo aad u jecelyihiin inay maqlaan haweenkooda oo reemaya, neeftuuraya, dhunkashada iyo dhabanna qabsigana la wadaagaya.
-Hadduu ninkaagu arko adigoo iska hoosyaal, istiin iyo raaxana aanad qaadanayn, hawsha uu qabanayana la qaybsanayn, inuu marka hore isagu iska shakinayo oo aaminayo inuu yahay wax-ma-tare aan ku raalligeli karin
Fanaan Caan ah oo Maanta Muqdisho yimid farxad darteedna dhulka u shumiyay (Daawo Sawirada)